Kalavasos Jonga iApartment yesiNtu eCyprus No1
Ime kwilali entle yaseKalavasos, le ndawo yokurhoxa yeyona ndawo ifanelekileyo yokujonga isiqithi esihle saseCyprus. I-Kalavasos View yindlu yokwenyani yaseCypriot, eyahlulwe kumagumbi abekwe kakuhle yayiyeyemveli idityanisiwe neyangoku. I-Kalavasos yimizuzu emi-5 yokuqhuba ukuya e-Zygi marina kunye neethaveni zeentlanzi ezingabamelwane kunye nemizuzu eyi-10 ukusuka kwiRhuluneli yoLwandle. Indawo esembindini, iKalavasos yimizuzu engama-20 ukuya eLimassol, imizuzu engama-30 ukuya eLarnaca kunye ne40 ukuya eNicosia.
Iiflethi ezihlotshiswe kancinane ze "Kalavasos View" zinekhitshi elixhotyiswe kakuhle kunye nefriji kunye neendawo zokupheka, indawo yokuhlala kunye neyokutya kunye negumbi lokuhlambela langasese. Iyunithi nganye ine-air conditioning, ukufudumeza, iiTV (kwigumbi lokulala kunye nendawo yokuhlala) kunye ne-Wi-Fi yamahhala. Igumbi lokuhlambela eliqhelekileyo likhona.
Intendelezo ekwabelwana ngayo ineendawo zokuhlala zesidlo sakusasa kunye neecocktails. Ibekwe phakathi kwegadi yelamuni kunye nemithi yetangerine kwaye ibonakalisa umbono oqaqambileyo welali kunye neentaba, ibonelela ngoxolo kunye nokuhle ukubaleka ukuze kudlule ixesha. Ibhafu yangaphandle eshushu ingasetyenziswa ngentlawulo eyongezelelweyo.
I-Kalavasos yindawo efanelekileyo yelali yokubeka iiholide ukuya eSipro, apho iindwendwe zinokonwabela indlela yokuphila yaseCypriot ngelixa ukwindawo efanelekileyo yokukhwela intaba kunye nokukhwela ibhayisekile. Hamba kwizitrato zayo ezimxinwa, tyelela iicawa ezithandekayo, wonwabele ikofu kwindawo yelali kwaye utye kwithaveni yesintu. Hamba uye kude, kunye neendlela ezintle zendalo kwaye wonwabe kubuhle bendalo engqongileyo.
Esi sesona sicwangciso sigqibeleleyo sokudibanisa ukufumana isiqithi kunye nokuphumla elunxwemeni!